विश्वका धनाड्य जेफ बेजोसले प्रेमिकाका भाइसंग मागे करोडौं क्षतिपूर्ति —
विश्वका धनाड्य जेफ बेजोसले प्रेमिकाका भाइसंग मागे करोडौं क्षतिपूर्ति
१४ माघ २०७७, बुधबार १४:०५ admin	0 Comments
विश्वका सबैभन्दा धनाड्य तथा अमेजनका मालिक जेफ बेजोसले आफ्नी प्रेमिका भाइसंग धरौटीको रुपमा करिव २० करोड रुपैयाँ मागेका छन् । वास्तवमा बेजोसकी प्रेमिका लरेन सेन्चेजका भाइ माइकल सेन्चेजले बेजोसका वि’रुद्ध मानहानीको मु’द्दा दर्ता गरेका थिए । माइकलले उक्त मुद्दा हारेका थिए । त्यहि कारणले अब बेजोसले माइकलसंग लीगल फीसको रुपमा खर्च भएको पैसा चुकाउन माग गरेका छन् ।
यद्यपि, दुबैबीच कसरी विवादको थालनी शुरुवात कसरी भयो भन्ने बारेमा रोचक जानकारी प्राप्त भएको छ । वास्तवमा उनीहरुबीच विवादको शुरुवात सन् २०१९ मा भएको थियो । त्यो बेला लरेन र बेजोस आ–आफ्नै वैवाहिक जीवनमा रमाइरहेका थिए । दुबै विवाहित भए पनि लरेन र बेजोसले एक–अर्कालाई मन पराउन थाले । उनीहरुको अफेयरको जानकारी केही म्यागेजिनहरुले समेत पाए । ती म्यागेजिनले लरेन र बेजासेका केही गोप्य म्यासेज तथा उनीहरुको जोडीका तस्बिर समेत प्रकाशित गरिदिए ।
म्यागेजिनले आफूसंग त्यस्ता धेरै फोटोहरु रहेको तर छाप्न नमिल्ने पनि जनायो । म्यागेजिनमा उक्त खबर छापिएको केही घण्टा पहिला मात्रै बेजोसले आफ्नी श्रीमती मेकन्जीसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि बेजोसले माइकल सेन्चेजले नै पत्रकारलाई नांगो फोटोहरु म्यागेजिनलाई लीक गरेको आरोप लगाएका थिए । बेजोसले लगाएको आरोपका कारणले आफ्नो मानहानी भएको माइकलले बताएका थिए ।
यद्यपि प्रमाण नभएका कारण न्यायाधीशले मुद्दा खारेज गरिदिए । त्यस्तै आफुले माइकलमाथि फोटो लीक गरेको आरोप नलगाएको बेजोसले अदालतमा बताएका थिए । ब्लूमबर्गको रिपार्टका अनुसार माइकल सेन्चेजले आफ्नी बहिनी र आफुलाई धोका दिएको बेजोसले शुक्रबार बताएका छन् । माइकलले करीव २० लाख रुपैयाँमा निजी कुराकानी म्यागेजिनलाई बेचेको पनि बेजोसले माइकलमाथि आरोप लगाएका थिए ।
त्यस्तै यी अरबपतिको तर्फबाट कानूनी फीस तिर्नका लागि गरिएको अनुरोध अश्लील र भद्दा भएको माइकलका वकील टम भारेनले बताएका छन् । बेजोसविरुद्ध मानहानीको मुद्दा हारेपछि माइकलले माथिल्लो अदालतमा अपील गर्ने चाहना रहेको यो भन्दा अगाडि वारेनले बताएका थिए । (एजेन्सीको सहयोगमा)
← अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनयापनका लागि कति खर्च लाग्छ ? थाहा पाइराखौ !
भाग्य होइन, कर्मको देश हो अष्ट्रेलिया – अष्ट्रेलिया अनुभब ( 1999-2001 ) →
जब प्रियंकाले आफ्ना प्रेमीलाई दराजभित्र लुकाइन्, खोलिन् यस्तो राज
१ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०५:१८ admin	0
यो शहरमा ६६ दिनपछि निस्कियो सूर्य… त्यो पनि केही घण्टाका लागि !
१६ माघ २०७७, शुक्रबार १०:२९ admin	0
अर्बपति रतन टाटाले विवाह नगर्नुको कारण यस्तो, प्रेम जीवनबारे उनको यस्तो खुलासा ।
१५ पुष २०७७, बुधबार ०४:४५ admin	0